विश्वबिजेता फ्रान्स स्विजरल्याण्ड बिरुद्दको हार पछि प्रतियोगिताबाट बाहिर !!!
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, संवाददाता June 29, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाण्डौ। युरो कप २०२० अन्तर्गत भएको गएरातिको खेलमा स्विजरल्याण्डले फ्रान्सलाइ पराजित गरेको छ।
नक आउट स्टेजमा पुगेका दुवै टोलिले पहिलो ९० मिनेटको दौरानमा ३-३ गोलको बराबरी गरेका थिए। खेलको १५ औ मिनेटमा अग्रता लिएको स्विजरल्याण्डले पहिलो हाफ सकिदा सम्म उक्त अग्रतालाइ जोगाएको थियो। दोस्रो हाफको ५७ र ५९ औ मिनेटमा बेन्जेमाको लगातार गोल पछि खेलमा फ्रान्सले बापसी गरेको थियो। बेन्जेमाको उत्कृष्ट प्रदर्शनबाट ६० औ मिनेटसम्ममा फ्रान्सले २-१ को अग्रता गरेको थियो।
त्यस्तै ७५ मिनेटमा पोग्बाद्वारा गरिएको गोलले फ्रान्सको अग्रतालाइ ३-१ बनाएको थियो। ३-१ को अग्रता पछि जित्ने स्थितिमा पुगेको फ्रान्सलाइ स्विजरल्याण्डले अच्चामित तरिकाले कम्ब्याक गर्दै ९० मिनेट सकिदा, खेललाइ बराबरीमा ल्यायो। सेफेर्भिच र गभ्रानोभिचको ८१ औ र ९० औ मिनेटको उत्कृष्ट गोलले खेललाई ३-३ मा ल्याएर छोडिदिएको थियो।
रेगुलर समयको खेल समाप्त भएपछी भएको अतिरिक्त हाफमा कुनै टोलीले पनि गोल गर्न सकेन। दुवै टोलीलाई उत्तिकै दबाब भएका कारण दुवै टोलीले भने जस्तो प्रदर्शन गर्न नसक्दा खेल पेनाल्टीसम्म पुग्यो।
पेनाल्टी अन्तर्गत पहिला चार शटमा दुवै टोलीले सबै शटलाइ गोलमा परिणत गरे। पाचौ शटका रुपमा स्विजरल्याण्डका एडमिर मेह्मेदीले गोल गर्दै स्कोरलाई ५-४ बनाए भने फ्रान्सका स्ट्राइकर किलियाँ एम्बाप्पेले शटलाइ देब्रे कुनामा प्रहार गर्ने क्रममा सोम्मेरले सेभ गरिदिए। उक्त सेभकै दममा स्विजरल्याण्डले अर्को स्टेजमा आफ्नो ठाउ सुनिस्चित गरेको हो। एम्बाप्पेको शट चुकेको कारण फ्रान्स प्रतियोगिताबाट बाहिरिन पुग्यो।
Posted in अन्तरष्ट्रिय फुटबल, गृहपृष्ठ, फुटबल, मुख्य खबरTagged #france vs switzerland
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाण्डौ। समूह तालिकाको पहिलो स्थानमा रहेको अर्जेन्टिनाले अन्तिम स्थानमा रहेको बोलिभियालाइ ४-१ को गोलान्तरले पराजित गरेको छ। पहिलो मिनेटबाटै आक्रामक रुप अपनाएको अर्जेन्टिनाका लागि छैठौ मिनेटमा गोमेजले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। उक्त गोल गर्ने क्रममा, मेस्सीको राम्रो पासलाइ, गोमेजले गोलमा परिणत गरेका थिए। पहिलो हाफको छैठौ […]
आलोचकहरूलाई चुप लगाउन रासफोर्ड फेरि फर्ममा फर्किदै
मड्रिड र लुका मोड्रीच बीच सम्झौता नवीकरण अन्तिम चरणमा
के एम्बाप्पे अहिले संसारकै उत्कृस्ट फुटबल खेलाडी हुन त?
घरेलु मैदानमा अर्जेन्टिनाको उत्कृस्ट प्रदर्शन, उरुग्वे सहजै पराजित
चेल्सी बेच्ने तयारीमा रोमान अब्रामोभिच
रोमाञ्चक खेलमा अस्ट्रेलियाको साँघुरो जित !!